MediaKind သည် TV ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ၊ အသံလွှင့်သူများနှင့်အော်ပရေတာများအတွက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသည့်ခိုင်မာသည့် cloud-based ဖြေရှင်းမှုများကိုစတင် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » MediaKind တီဗီ Service Providers, အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, လူငယ်ကဏ္ဍနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအဘို့နောက်ထပ်တန်ဖိုးကိုမကယ်မလွှတ်မှကြံ့ခိုင် cloud-based ဖြေရှင်းချက်လွှတ်တင်
ကနဦးလျှောက်လွှာ-တိကျတဲ့, 'အာကုလလွှ' 'အဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်ထုပ်ပိုးဖြေရှင်းနည်းများ,' Cygnus 360° ဖြစ်ရပ်များ ',' Cygnus အလှူငှပေး 'နဲ့' Cygnus ဖြန့်ဖြူး ''
ပဏာမပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဝေရောင်းချခြင်း core ကိုထုတ်လွှင့်အလှူငွေများနှင့်ဖြန့်ဖြူးအသုံးပြုခြင်းကိုအမှုပေါင်းအမှာစကားအဖြစ်အသစ်သော OTT streaming များနှင့် 360 ဒီဂရီကိုဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုလျင်မြန်စွာ, ထိရောက်ဖြန့်ကျက်ဖွင့်
Kubernetes orchestration နှင့်အတူအားလုံးလေးယောက်ဖြေရှင်းချက်သြဇာ MediaKind ရဲ့ကွန်တိန်နာ-based ဗိသုကာ
FRISCO, Texas - စက်တင်ဘာလ 10 2019 - IBC2019, MediaKind တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာနည်းပညာခေါင်းဆောင်များ၏ရှေ့တွင်အဆိုပါ MediaKind ဠာအစုစုထဲကနေလျှောက်လွှာ-တိကျတဲ့ထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအကွာအဝေးတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ် - အာကုလလွှ, Cygnus 360 ပွဲများ, Cygnus ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့် Cygnus ဖြန့်ဖြူး° ။ MediaKind ရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြေရှင်းချက် packages များ၏ကြေညာချက် core ကိုထုတ်လွှင့်အလှူငွေများနှင့်ဖြန့်ဖြူး applications များနှင့်စွဲငြိဖွယ်ရာ OTT streaming များဝန်ဆောင်မှုများကိုပို့ဘို့အသတ်သတ်မှတ်မှတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်း, Multichannel HD အထူးသဖြင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များန်းကျင်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောရုပ်သံလိုင်း UHD, ဝေးလံခေါင်သီ '' အိမ်မှာ '' ထုတ်လုပ်မှုနှင့် 360 ဒီဂရီကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ။
နေဆဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဆက်ပြီးစဉ်ကဤအရွယ်မှာဖြေရှင်းနည်းများ, အပိုဆောင်းအခြေခံအဆောက်အဦများသို့မဟုတ် On-site ကိုစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့များဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲသစ်ကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေး, အော်ပရေတာ, အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ထုတ်လွှင့် enable ။ အဆိုပါအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ packages များ core ကိုထုတ်လွှင့်အလှူငွေများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ပြည့်စုံဖြေရှင်းနည်းများ, Multi-ရည်ရွယ်ချက်မီဒီယာ headends, ထိရောက်သိုလှောင်မှုနဲ့ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ယနေ့မီဒီယာရှုခင်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြောင့်ထူးခြားစားသုံးသူအတွေ့အကြုံများကမ်းလှမ်းရန် MediaKind ရဲ့ကျယ်ပြန့်မဟာဗျူဟာအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
မာကုစယ်, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မဟာဗျူဟာနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအရာရှိ, MediaKind က "မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်း ပို. ပို. cloud-based, ဆော့ဖ်ဝဲ-defined ဆီသို့ရွှေ့လာခဲ့သည်အဖြစ်-a-ဝန်ဆောင်မှုဟာယပူဇော်သက္ကာ, ရောက်ရှိဖို့ဆွဲဆောင်နှင့်ကျြမှောကျခတျေစားသုံးသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက် packages များ၏ပစ်လွှတ်မှတဆင့်ကျနော်တို့ CAPEX လျှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဖွင့်ကြသည်တည်ဆဲစနစ်ကဗိသုကာများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိုအပ်သောအဖြစ်တိုက်ရိုက် OTT နှင့် 360 ဒီဂရီဗီဒီယိုအားယဇျပူဇျောအပါအဝငျတက်ဆင်းအသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်ရန်အပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုကောင်းအောင်, ဖြုန်းနေကြတယ်။ မီဒီယာအာကာသ၌အကြှနျုပျတို့၏ချမ်းသာကြွယ်နှင့်ကာလကြာရှည်အမွေအနှစ်များအပေါ်ဆွဲကျနော်တို့အားလုံးကြည့်ရှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအနှံ့စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများအရည်အသွေးမြင့်၏ချောမွေ့စွာဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြင့်ထိုအစျေးကွက်အသွင်ကူးပြောင်းမှုမှတုံ့ပြန်နေကြသည်။ "
တိုက်ရိုက်-to-စားသုံးသူ OTT န်ဆောင်မှုများ
အာကုလလွှတစ် convergence, cloud-based OTT နှင့်လက်ခံရရှိခံရဖို့အကြောင်းအရာဖွကြောင်းထုတ်လွှင့် headend ဖြေရှင်းချက် transcoded, multiplexing, ထုပ်ပိုးပြီးစာဝှက်ထားတဲ့သည်နှင့်တစ်ဦးအပေါ်-ရဝုဏ်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ချွတ်ရဝုဏ်ရှိမရှိတစ်-Service ကို-အဖြစ်သို့မဟုတ်အဖြစ်ရုပ်သံလိုင်းစီမံခန့်ခွဲ မိုဃ်းတိမ်ဇာတိပူဇျောသက်ကာ။ ဒီအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်လျင်မြန်စွာစားသုံးသူမှအဆုံးအရည်အသွေးပေါ်မထိခိုက်စေဘဲ OTT န်ဆောင်မှုများဖြန့်ချိမယ့် '' တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင် '' ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့အော်ပရေတာပေးပါသည်။ အာကုလလွှနှင့်အတူဆင့်တဦးတည်းနှင့်နှစ်ခုကိုအော်ပရေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လည်ပတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ convergence OTT နှင့်ထုတ်လွှင့် headends ပိုမိုလွယ်ကူစွာနှင့်လည်းကိုယ်ပိုင်အတူအသစ်နှင့်ဆန်းသစ်ဝင်ငွေစီးမှအကျိုးနှင့်ပြောင်းလဲနေသောကြော်ငြာသွင်းပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ပါတယ်
OTT streaming များ၏ application တစ်ခုအဖြစ် 360 ဒီဂရီကိုဗီဒီယို
cygnus 360° ဖြစ်ရပ်များ
360 ဒီဂရီဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေအတွက် MediaKind ရဲ့ဆုရနည်းပညာအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, Cygnus 360 ပွဲများ°တစ်ဦးအပိုဆောင်းဝန်ဆောင်မှုဖြေရာယဇ်အဖြစ် 360 ဒီဂရီကိုဗီဒီယိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရှိရင်းစွဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှန်ဆောင်မှုများဖြည့်စွတ်ရန်အော်ပရေတာများနှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များကို enable ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ခုတည်းက high-quality အလှူငွေအရင်းအမြစ် မှစ. MediaKind အများပြည်သူ CDN ကျော်တစ်ဦးအော်ပရေတာရဲ့အပလီကေးရှင်းအဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းမှတဆင့်တစ်ပြိုင်နက်တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေမှုအတွက်သင့်လျော်သော (360K အထိ) ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့်ပုံစံများသို့တိုက်ရိုက် 8 ဒီဂရီကဗီဒီယိုကို process နဲ့ကယ်မနှုတ်နိုင်။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းပေးပို့အန္တရာယ်နှင့် On-site ကိုကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချခြင်း, အဖြစ်အပျက်၏စင်မြင့်နှင့်အသံလွှင့်လျှောက်လုံး 24 /7နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပါဝင်သည်။
အကြောင်းအရာလေးလည်းနှင့်လဲလှယ်များအတွက်စျေးကွက်မှာပစ်မှတ်ထားဤသည်အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြေရှင်းချက်, အရည်အသွေးမြင့်မား, အနိမ့်အောင်းနေချိန်ပေး Point-to-point တိုက်ရိုက်အလှူငွေမှတဆင့်ဆက်သွယ် ဂြိုဟ်တု လူထုသည်မိုဃ်းတိမ်သို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောစားသုံးမိအပါအဝင်သို့မဟုတ် IP ကွန်ယက်များ, ။ အဆိုပါတိုက်ရိုက်အလှူငွေလင့်များမှတဆင့် HDR ကိုထောက်ခံမှုများပါဝင်သည် ဂြိုဟ်တု သို့မဟုတ်ဖိုင်ဘာကျော်, IP ကို ​​interfaces နဲ့ content ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစံချိန်စံညွှန်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရာပူဇော်သက္ကာကို။ cygnus ပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုလည်း bandwidth ကိုထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ HEVC သုံးပြီးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောဝေးလံခေါင်ဖျားသို့မဟုတ်အိမ်မှာထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောမူလတန်းဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်ကနေတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေရန်အော်ပရေတာများနှင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု နှင့် IP ကွန်ရက်များ။ cygnus ဖြန့်ဖြူးသည်မိုဃ်းတိမ်သူ့ဟာသူအတွင်းလုံခြုံ, စိတ်ချ ingress နှင့် Egress တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ၏အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကိုသာဓကအနေဖြင့်အဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနိုင်ပါတယ်။ MediaKind ရဲ့ modular အသံဖမ်းခြင်းနှင့် MK ဒါရိုက်တာ၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့် 128-bit encryption နှင့်အတူခြွင်းချက် access ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူတွဲသောအခါ, Cygnus ဖြန့်ဖြူးမြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးပရီမီယံအကြောင်းအရာလုံလုံခြုံခြုံတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် futureproof ပူဇော်သက္ကာကိုပေးပါသည်။ အဖြစ်ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသခံကြော်ငြာသွင်းအားဖွင့်, ဒီသစ်ကိုထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်ကနေနိမ့်အန္တရာယ်ရွှေ့ပြောင်းဆီသို့ဦးတည်လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ် ဂြိုဟ်တု အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုဖြန့်ဖြူးရန်။
IBC2019 မှာ MediaKind အကြောင်း
IBC2019 မှာ MediaKind (# 4.A01), ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနဲ့မူလအားဖွင့်ဘယ်လိုပြသထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်မီဒီယာရှုခင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆိုင်းတုန့်ပြန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တီဗီဝန်ဆောင်မှုပေးပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ '' ကံကြမ္မာမီဒီယာ '' တစ်ဦး IBC ပြပွဲဆောင်ပုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး, MediaKind ရဲ့ရပ်တည်ချက်မှဧည့်သည်များ၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအစုစုကိုအပြည့်အဝအနံကိုခံစားရသည့် MediaKind ဠာနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်မှတဆင့်ဖွတန်ဖိုးကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် ပလီကေးရှင်းများထားရှိ။ ပြပွဲကာလအတွင်း MediaKind နေရာတိုင်း၎င်း၏ဆုရနည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများဖောက်သည်လူတိုင်းထူးခြားတဲ့စွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံများကယ်နှုတ်တော်မူကူညီပေးနေကြပါသည်ပုံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ဒီမှာ.
2015 ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC IBC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး ဆူညံသံလျော့ချခြင်း OTT SJGolden - လှံ & Arrows သိုလှောင်ခြင်း စာတန်းထိုး UHD / 4K / HD ကို က Ultra HD ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2019-09-10
ယခင်: ပရိဘောဂဒီဇိုင်နာ - CAD ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း - rendering